Jawaari “Waxaan dareemay isu awood sheegato, mana rabo in darteey dhiig u daato” | Saxil News Network
Jawaari “Waxaan dareemay isu awood sheegato, mana rabo in darteey dhiig u daato”
“Shacbiga Soomaaliyeed waa dad wanaagsan oo la xukumi karo, balse waxa ay u baahanyihiin caddaalad, caddaalad, caddaalad” ayuu yiri Jawaari , isaga oo xildhibaanada xusuusiyay in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu matalo konton iyo dhawr kun oo shacabka ah, sidaasi darteedna ay tahay “in go’aanada ay gaaraysaan iyo waxa aad saxiixaysaan ku sameeya si xog ogaalnimo ku jirto”.
Mar uu ka hadlay go’aankiisa is casilaada ayuu tusaale usoo qaatay qiso dhacday xilligii Nabi Daauud SCW, taas oo nabiga loo keenay in uu kala xukumo labo haweenay oo isku heystay ilmo yar, kadibna uu nabiga ku yiri waa la idiin kala jarayaa ilmaha, kadibna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ilmahaas ay ka tanaasushay ilmaha. “Intii uu baarlamaanka kala go’i lahaa, aniga ayaa tanaasulay” ayuu yiri Jawaari.
Guddoomiyihii hore ayaa xildhibaanada iyo shacabkaba ka codsaday in ay cafiyaan, isagana uu cafiyay qof kasta, balse waxa uu sheegay in uu halkii kasii wadi doono shaqadii 56-da sano uu usoo hayay dowladda iyo shacabka, sida uu sheegayna xildhibaan sii ahaan doono. “Waxaan ogaaday in baarlamaanka uu qaadan lahaa go’aan garab marsan sharciga iyo qaanuunka, taas oo bar madoow ku noqon lahayd taariikhdeena” ayuu yiri Prof Jawaari oo uu sacab u dhacayay mararka qaar.
Wuxuu soo taxay waxbqabadkii baarlamaanka isaga oo adeegsanayay oraahda ah “Waxaan idiinka tagayaa baarlamaan ….”, tusaalana usoo qaatay qodobo ay ka midyihiin in baarlamaanka uu xiriir la leeyahay baarlamaanada adduunka oo dhan, kuwa dowlad goboleedyada, leh dhammaan laamihii kala duwanaa ee baarlamaan looga baahnaa, islamarkaasna laanta fulinta ku qasbay in aanan khasnada dhexe lagala bixin qarash uusan baarlamaanka anisixinin.
“Waxaan ansixinay 8 miisaaniyad laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii” ayuu yiri Jawaari.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa heysta muddo 15 maalmood ah oo ay tahay in uu kusoo doorto guddoomiye cusub, waxaana durba isa soo sharaxay musharixiin kala duwan